FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AN'NY TERRY WIRE FOX TERRIER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika an'ny Terry Wire Fox Terrier
Bronte, mpangarom-paosy 9 volana, Wire Fox Terrier (AKC reg.)
wy'ur fahks TAIR-ee mijery
Ny Wirehaired Fox Terrier dia alika antonony. Ny karan-doha dia fisaka, somary tery ny masony. Somary mijanona ny fijanonana. Ny vavam-borona dia miakatra tsikelikely amin'ny orona mainty. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny kaikitry ny hety. Mainty ny lokon'ny maso sy ny maso. Ny sofina kely, miendrika V dia midina manakaiky ny takolaka. Matevina sy hozatra ny hatoka. Mahitsy ny tongotra. Ny rambony dia avo lenta ary matetika no miantsona amin'ny 1/4, mamela 3/4 amin'ny halavany tany am-boalohany. Naoty: tsy ara-dalàna ny fampiharana ny rambony amin'ny ankamaroan'ny faritra Eropa. Ny palitao dia manana volo matevina sy miolakolaka, mitovy amin'ny volo eo ivelan'ny voanio. Matevina sy mifanakaiky ny volo ka rehefa misaraka dia tsy hitanao ny hoditra. Manana palitao fohy sy malefaka izy io. Ny palitao dia fotsy matevina misy marika mainty na volontany.
Ny Wirehaired Fox Terrier dia tertera mahery fo sy be herim-po. Izy io dia falifaly, mahafinaritra, mazoto ary milalao, indrindra amin'ny ankizy. Be fitiavana, tena mahafoy tena sy mahatoky amin'ny fianakaviana, tena mankafy ny fiarahan'izy ireo. Noho ny faniriany mihaza mahery, ny Wire Fox Terrier dia hihaza ihany koa ary mety hamono olona hafa tsy misy K-9 biby , toy ny bitro SY vorona , raha omena ny vintana. Tehirizo araka ny tokony ho izy ity karazana ity na amin'ny faritra mihidy tanteraka, satria ny Wire Fox Terrier dia te-hizaha. Raha mifanerasera tsara ny Wire Fox Terrier ary ampidirina dia afaka mifanaraka tsara amin'ny alika hafa. Tena manan-tsaina, ity karazana ity dia azo ampianarina hanao fikafika. Alika somary manjakazaka sy matanjaka be io mety hanjary ho sorena sy ho sosotra raha tsy misy ny karazana sy ny habetsaky ny fanatanjahan-tena mety, na ara-tsaina na ara-batana. Tsy ny vatany ihany no mila ampiasaina fa ny sainy koa. Zava-dehibe indrindra fa ity alika ity dia mpitondra mavesatra 100% sy tsy miovaova. Raha manana mpandefitra malemy ilay alika ary avelany haka an'io trano io ny terrier, mivoatra Syndrome kely alika , hanomboka haneho ambaratonga samihafa izy olan'ny fitondran-tena . Ny olana dia mety misy, fa tsy ferana amin'ny, fanamby mifehy, zavatra miambina na toerana na koa ny sakafony manokana avy amin'ny tompony, fangalarana tafahoatra, fialonana, fanahiana fisarahana , fanimbana, fanoherana ny alika, finiavana, firohondrohona, fandrika, fanaikitra ary tsy fahatokisana amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe indraindray. Ny alika dia mety ho vonona ny handoa vola amin'ny fotoana rehetra, maloto ary maika, satria manandrana miaro ny toerana ambony ITS ao amin'ny filaharan'ny alpha. Tsy toetran'ny Wire Fox Terrier izany, fa ny fihetsika entin'ny fomba itondran'ny alika ny olona manodidina azy. Ireo fihetsika ireo dia azo ahitsy raha vantany vao mihaona ny toe-tsain'ny alika: milamina, mafy orina, tsy miovaova fitsipika tokony harahina , mametra hoe inona izany ary tsy avela hatao, miaraka amin'ny isan'andro mandeha an-tongotra na mihazakazaka .
habe sy lanjan'ny bulldog frantsay
Milanja: Lehilahy 15 - 20 pounds (7-9 kg) Vavy 13 - 18 pounds (6 - 8 kg)
Ny epilepsy dia ahiahiana tokoa fa manana singa fototarazo amin'ity karazany ity. Ny olana kely dia ny fitetezan'ny orona, ny fihenan'ny masomaso, ny distichiasis, ny katarakta, ny aretin'ny Legg-Calvé-Perthes ary ny fivakisan'ny soroka. Mora amin'ny fivontosan'ny sela .
Ny Wire Fox Terrier dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Mavitrika be izy io ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany.
Wirehaired Fox Terriers mila a mandeha isan'andro na mihazakazaka . Raha azo atao dia tian'izy ireo ny mihazakazaka afaka amin'ny faritra azo antoka. Tehirizo amin'ny alika ity alika ity raha misy biby kely manodidina. Mahery ny faniriana mihaza ireto alika ireto ary azo inoana fa hanenjika biby kely izy ireo.
Raha ho biby fiompy ny Wirehaired Fox Terrier dia azonao atao ny miala amin'ny fikosehana azy amin'ny borosy mafy sy ny fandroana raha tsy ilaina. Mba hitazomana ny akanjo tsara indrindra palitao dia tsy maintsy esorina imbetsaka isan-taona izy io ary matetika kokoa ho an'ny alika fampisehoana. Misy fomba fanao amin'ny fampiratiana tsy fahita firy. Ireo mpikarakara matihanina dia manana kitapo feno paosy hitazomana ny Wire ho tsara indrindra amin'ny peratra fampisehoana. Ny Wire dia mandatsaka kely tsy misy volo ary tsara ho an'ireo marary allergy.
Ny Fox Terrier dia novolavolain'ny fiampitana taloha Dachshunds , English Hounds, ary avy eo ny Fox Hound SY Beagle . Izy io dia iray amin'ireo alika terrier tranainy indrindra, teraka tany amin'ny nosy Britanika tamin'ny taonjato faha-17. Nampiasain'ny tantsaha izay mila alika mba hanampiana amin'ny famoahana ireo biby izay hohanin'ny mpamboly, toy ny amboahaolo sy voalavo ary verinia kely hafa. Hitan'ny Fox Terrier amin'ny tany ny biby, tsy mitsahatra mandavaka, mivovo, mimenomenona ary moka mandra-panenjehany ilay biby avy tao an-davaky izay nahafahan'ny mpihaza namono azy avy eo. Ny Fox Terrier dia tonga tamin'ny palitao malamalama sy palitao mirindra ary samy noheverina ho karazany iray nandritra ny taona maro. Ny Wirehaired Fox Terrier dia novokarina tamin'ny fiampitana ilay terrain mainty sy mainty vita amin'ny tery, hampiasaina any amin'ny tany mikitroka, ny palitaony dia mora tohina noho ny an'ny simba. Fox Terrier malefaka . Ny fenitra voalohany ho an'ny Smooth Fox Terrier dia natsangana tamin'ny 1876, nanasaraka azy tamin'ireo alika misy tarika. Na izany aza, dia mbola raisina ho karazany iray ihany miaraka amin'ny karazany palitao isan-karazany amin'ny kliobany sasany, fa tafasaraka tany Etazonia hatramin'ny taona 1984. Samy fantatry ny AKC ny Smooth Fox Terrier sy ny Wirehaired Fox Terrier, tamin'ny taona 1885. Ny sasany amin'ireo Fox Ny talenta an'i Terrier dia misy: mihaza, manara-dia, mpiambina, mailaka ary manao fika.
laboratoara masina bernard mifangaro alika kely
Bella the Wirehaired Fox Terrier
'Salama. Ity ny sarin'i Frida, ilay vehivavy Wirehaired Fox Terrier, fony izy vao 8 volana. Alika tena tsara izy, tia miaraka amin'ny fianakaviana mandritra ny andro. Tamin'izaho vao nahazo azy dia natahotra kely aho 'satria reko fa mahatsiravina sy mahasosotra ny karazany, fa hanao izy ireo mandinika ny zava-drehetra , fa tsy mba toy izany mihintsy. Mila izy fanatanjahan-tena be dia be , saingy milamina tokoa ao anaty trano. '
'Ity i Frida, ilay vehivavy Wirehaired Fox Terrier, fony izy 8 volana.'
Defa, Wirehaired Fox Terrier, 4 taona, miaraka amin'i Molly, alika kely Wirehaired Fox Terrier amin'ny 4 volana
Asta sy Ruppert, Wire Fox Terriers roa sambatra dia mifandraika mivantana amin'ny alàlan'ny rainy, izay nandresy tamin'ny karazany tsara indrindra tamin'ny 2003 Westminster Dog Show.
lisitry ny karazana alika araka ny filaharan'ny abidia
Wire Fox Terrier, 3 taona, mihazakazaka mitondra baolina
Wire Fox Terrier, 3 taona
Molly, alika kely Wirehaired Fox Terrier amin'ny 4 volana
Defa, Wirehaired Fox Terrier, 4 taona
Hijery ohatra misimisy momba ny Wire Fox Terrier
Sary Wire Fox Terrier 1
Wire Fox Terriers: sary an-tsokosoko voaangona
malaso volontany sy fotsy any atsinanana
Shinoa crested Jack Russell Mix
sarin'ny pitbull sy chihuahua mix